segesi mqengqeleki ukwala - China Langzhi Welding Equipment
segesi ukuvula mqengqeleki welding Ukusiqwabazel mqengqeleki for cylinder iwelding zinokulungiswa ngayo ibe self-ulungelelwaniso, imodeli adjustable kwaye njalo Quka nesiseko, drive mqengqeleki, mqengqeleki khoboka, isibiyeli nokudlulisa isixhobo isixhobo kunye drive amandla isixhobo etc.Transmit ukuphehla drive roller, ukuqhuba workpiece nge iimpikiswano zochuku phakathi drive mqengqeleki kunye workpiece. Eqonda komphetho longitudinal & setyhula welding.Equiped kunye kumatshini iwelding ngokuzenzekelayo ukukhuthaza umgangatho welding, lulekani amandla yabasebenzi, ukuphucula productio ...
welding Ukusiqwabazel mqengqeleki for cylinder iwelding zinokulungiswa ngayo ibe self-ulungelelwaniso, imodeli adjustable kwaye njalo Quka nesiseko, drive mqengqeleki, mqengqeleki khoboka, isibiyeli nokudlulisa isixhobo isixhobo kunye drive amandla isixhobo etc.Transmit ukuphehla drive mqengqeleki, ukuqhuba workpiece nge kunobunye phakathi drive mqengqeleki kunye workpiece. Eqonda komphetho longitudinal & setyhula welding.Equiped kunye kumatshini iwelding ngokuzenzekelayo ukukhuthaza umgangatho welding, lulekani amandla yabasebenzi, ukuphucula imveliso efficient.Cooperating kunye zentsimbi manual, idlala indima uvavanyo kunye nebandla.
Self-ulungelelwaniso lisetyenziswa kwi welding of njengesilinda. Umgama phakathi nosaziwayo nga self-hlengiswa .Adjusted iwelding ekujikeni rollercan zinokulungiswa ngayo ibe ilothe-Screw uhlobo manual adjustable, evulwa manual uhlobo adjustable kunye motor kwisilayidi. Umgama phakathi nosaziwayo ingaba baesd justable kwi sangqa njengesilinda. utshintsho ubunzima umthwalo ukusuka 5T ukuya utshintsho ubukhulu 200T.Welding ukususela bungange 250 ukuya
8000mm, ngokusesikweni iyafumaneka.
: Previous izixhobo Small enesiqu ukuwelda longitudinal
Okulandelayo: iwelding rotator
Weld Ivula Rolls